Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manafoana ny sidina Tel Aviv ny Ukraine International Airlines
Ny fiarovana ny mpandeha sy ny ekipa no laharam-pahamehan'ny Ukraine International Airline.
Ny sidina UIA mankany / avy amin'ny TLV: PS778 / PS1777 amin'ny Mey, 14 dia nofoanana
Ukraine International Airlines dia mihetsika mifanaraka amin'ny NOTAM navoakan'ny manampahefana misahana ny fiaramanidina israeliana
Raha misy vaovao vaovao miseho dia hampandrenesina ireo mpandeha amin'ny alàlan'ny mailaka, voalaza mandritra ny famandrihana tapakila na fividianana
Nanao izao fanambarana manaraka izao i Ukraine International Airlines (UIA):
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Okrainamampahafantatra fa mifanaraka amin'ny NOTAM navoakan'ny manampahefana misahana ny fiaramanidina israeliana, ary koa mba hiantohana ny fiarovana ny mpandeha sy ny ekipa, ny sidina UIA mankany / avy amin'ny TLV: PS778 / PS1777 amin'ny Mey, 14 dia nofoanana.
Angatahina ny mpandeha hanaraka akaiky ny vaovao farany ao amin'ny tranonkalan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ary koa amin'ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina Boryspil sy Ben Gurion
Raha misy vaovao vaovao miseho dia hampandrenesina ireo mpandeha amin'ny alàlan'ny mailaka, voalaza mandritra ny famandrihana tapakila na fividianana.
Ny fiarovana ny mpandeha sy ny ekipa no laharam-pahamehan'ny UIA. Noho izany, ny fanapahan-kevitra hampiasana sidina dia hojerena isaky ny 24 ora, raha jerena ny fisian na tsy fisian'ny fetra amin'ny sidina TLV.
Ho an'ny tapakila amin'ny sidina tena voafafa dia azo atao izao:
Fanovana daty ho an'ny dia amin'ny sidina UIA amin'ny zotra iray ihany nefa tsy misy sazy sy fahasamihafana amin'ny saran-dalan'ny tapakila tany am-boalohany ao anatin'ny tandrify ny tapakila, iharan'ny fanesorana ny fameperana seranam-piaramanidina.
Tapakila fifanakalozana amin'ny kaody Promo miaraka amin'ny bonus fanampiny 25% ao amin'ny tranokalan'ny UIA
Famerenana ny tapakila
Mampahatsiahy anao koa izahay fa mba hiantohana ny fiarovana ny mpandeha sy ny ekipa, dia nofoanana koa ny sidina avy amin'ny 13.05 amin'ny zotra Kiev-Tel Aviv-Kiev.